Ubehlonishwa owangena ngephutha kwezesayensi
UKHUTHAZA abesifazane ukuthi bangaye-sabi isayensi uNksz Mbali Gwacela ofundisa kulo mkhakha e-University of KwaZulu-Natal
ZANELE MTHETHWA | August 29, 2019
WANGENA ngephutha emkhakheni wesayensi owesifazane osekhuthaza nokuthi bande abamlandelayo.
UNksz Mbali Gwacela (31), ofundisa kwiSchool of Agricultural, Earth and Environmental Sciences e-University of KwaZulu-Natal, ungomunye wabesifazane abahlonishwe yilesi sikhungo kule nyanga.
Lesi sikhungo sinomkhankaso obizwa ngeWonder Women, ogxile ekuhlonipheni abasemkhakheni wezesayensi.
Yize angena ngephutha uNksz Gwacela kodwa akasazisoli ngenxa yokubona indlela amathuba ayinsada ngayo kulo mkhakha.
“Kwaba nzima ukuthi ngishintshe ngoba ngazithola sengikulo mkhakha ngingahlelanga. Kuthe sengiqhubeka nalo mkhakha ngabona ukuthi angidukanga, kunalokho kwakumele ngifundiswe kabanzi ngawo ngisasesikoleni. Ngibone sengikulo mkhakha ukuthi kubaluleke kanjani ukufunda ugxile ezivundweni zeSayensi neMaths esikoleni.”
UNksz Gwacela uyilungu lenhlangano iBlack Women in Science ekhuthaza abesifazane ukuthi balandele lo mkhakha.
Le nhlangano isiza nentsha yesifazane efuna ukulandela lo mkhakha, ikhuthaze nokufundwa kweSayensi neMaths ezikoleni.
UNksz Gwacela uthe ngale nhlangano bafuna ukuqeda itwetwe kwabesifazane abasatshiswa yilezi zifundo.
“Lezi zifundo zibaluleke kuyo yonke imikhakha yempilo. Kuba nzima uma ungenzi kahle kulezi zifundo ngoba konke kulele kuzona. Nami ngingomunye wowayezisaba lezi zifundo kodwa sengizithola ngigxile kuzona futhi ngiyazithanda. Ngiyazisola ngokuthi ngadembesela ukunamathela kulesi sifundo ngisasesikoleni yingakho sengikhuthaza nabanye,” kusho uNksz Gwacela.
UNksz Gwacela waqala ngezifundo zeSocial Sciences egxile kwiGeography. Akakhohlwa ehambela izindawo okubalwa eDrakensburg naseMthunzini njengengxenye yalezi zifundo zeGeography.
Uthe kuningi akufunda besizwa uSolwazi Trevor Hill noSolwazi Heinz Beckedahl abebebafundisa kulo mkhakha.
Kuthe eseqedile ukufunda kwadingeka angene emkhakheni weFood Security, lapho aqala khona uthando lweSayensi.
Uzimisele ukuba yisibonelo kwabesifazane abafuna ukungena emkhakheni wesayensi. Ukufeza leli phupho wenza iziqu zobudokotela kwiFood Security lapho ezocwaninga khona ngendlela yokuphatha ukudla nokuvikelwa kwakho.
Kulolu cwaningo usebenzisana nomphakathi waKwaSwayimane, Msinga, Mbumbulu naseNhlazuka.
“Wonke umphakathi unendlela owenza ngayo ukukhiqiza nokusebenzisa ukudla. Ngalolu cwaningo engizolwenza ngale miphakathi ngihlose ukuthola indlela yokusiza imindeni ukuthi isebenzise ukudla okunempilo.”
Ukholwa ukuthi abesifazane bangenza omkhulu umehluko emkhakheni wezesayensi, ikakhulukazi wezokucwaninga.
Uyavuma ukuthi kuseyinselelo ukuba kulo mkhakha ngoba ngisho umphakathi awukwethembi uma ufuna ukusebenzisana nawo kwezokucwaninga.
UNksz Gwacela uneMaster’s Degree kwiFood Security futhi uke waba yisikhulumi kwi-Academy of Science of South Africa nakwiFood Security and Policy Workshop.
Wazalelwa wakhulela eSt Wendolins KwaSanti.